Profaịlụ ụlọ ọrụ - Xiamen Westfox Imp. & Exp. Co., Ltd.
Egwuregwu Bra & Tops
Leggings & mkpụmkpụ
Bọọlụ & bọọlụ bọọlụ
Ịgba ịnyịnya Jersey
Uwe ojii & Sweatshirts
Uwe akwa ụmụ nwanyị
Uwe mmiri ụmụ nwoke
Ụmụ nwanyị na -egwu mmiri
Jaketị ndị nwoke
Jaketị ụmụ nwanyị
Xiamen Westfox Imp. & Exp. Co., Ltd bụ ọkachamara na -emepụta akwa na -ejikọ ụlọ ọrụ na azụmaahịa, na -etinye aka n'ahịrị Yoga Pants dị iche iche, uwe ime, uwe egwuregwu, uwe mmiri, uwe mwụda bọọdụ, jaketị n'èzí na ihe ndị ọzọ. Ụlọ ọrụ anyị dị na ogige mmepụta ihe ama ama na Jinjiang, yana ụlọ ọrụ azụmaahịa dị na Xiamen (ụlọ ọrụ dị nso, kilomita 30km), obodo mara mma nke ubi na mpaghara akụ na ụba pụrụ iche.
E hiwere ụlọ ọrụ anyị na 2009 afọ, bụ otu n'ime usoro uwe na -emepụta akwa na China, ihe dị ka ndị ọrụ 400 ọkachamara ndị na -emepụta ejiji ọkachamara na 12 QC, yana otu ezigbo ọrịre maka ijere onye ahịa ọ bụla ozi.
Anyị na -elekwasị anya n'ahịa ndị Europe na America, ahịa South America na Australia. Kwa afọ, anyị na-aga ihe ngosi Canton, ihe ngosi anwansi (Las Vegas), Germany ISPO Fair na ihe ngosi Melbourne, ugbu a, anyị esorola ụdị mkpa dị ka Was-Mart, Disney na Puma.
Anyị na -etinye onwe anyị n'ichepụta uwe dị elu maka ndị ahịa anyị ma kwalite ọbụbụenyi anyị, na -emepekọ ọnụ. Anyị kwenyesiri ike na ike anyị niile anyị ga -ezute afọ ojuju gị maka mmeri na mmeri. Jiri obi ụtọ nabata ileta anyị.
Eji nlezianya mee ngwaahịa ọ bụla, ọ ga -eme ka afọ ju gị. Enyochala ngwaahịa anyị na usoro mmepụta, n'ihi na ọ bụ naanị inye gị ogo kacha mma, anyị ga -enwe obi ike. Ọnụ ego nrụpụta dị elu mana ọnụ ahịa dị ala maka imekọ ihe ọnụ anyị ogologo oge. Ị nwere ike ịnwe nhọrọ dị iche iche yana uru ụdị niile nwere ntụkwasị obi. Eziokwu nye ndị ahịa ọ bụla bụ ihe anyị rịọrọ! Ije ozi klaasị mbụ, ịdị elu dị elu, ọnụahịa ezi uche dị na ya na ụbọchị nnyefe ngwa ngwa bụ uru anyị! Nye ndị ahịa ọ bụla ezigbo ozi bụ echiche anyị! Nabata ndị ahịa ụwa niile na-ezitere anyị ajụjụ ma na-atụ anya ezigbo mmekọrịta gị!
Na ebumnuche nke "ịsọ mpi na ezigbo mma wee zụlite site na imepụta ihe" yana ụkpụrụ ọrụ nke "were arịrịọ ndị ahịa dị ka nghazi", anyị ga -agbasi mbọ ike nye ngwaahịa ruru eru yana ezigbo ọrụ maka ndị ahịa ụlọ na mba ụwa.
Ụlọ nrụpụta ụlọ
Ihe ngosi katọn (30/04-3/05)
Ihe ngosi Melbourne (07/11-09/11)
Ihe ngosi anwansi (4/2-7/2)
Ihe ngosi ISPO (28/6-01/07)
Onye ahịa na -eleta anyị
Nleta ndị ahịa USA
"Mepụta ụkpụrụ, na -ejere onye ahịa ozi!" bụ ebumnuche anyị na -achụso. Anyị na -atụ anya n'ezie na ndị ahịa niile ga -ewepụta ogologo oge na imekọ ihe ọnụ bara uru na anyị.Ọ bụrụ na -ịchọrọ ị nweta nkọwa ndị ọzọ gbasara ụlọ ọrụ anyị, biko kpọtụrụ anyị ugbu a!
Okwu: Ụlọ 1404 Office B, Strait Economic Center 893, HaiCang, Okporo ụzọ Xiamen, China.
Ekwentị mkpanaka: 0086-139-5925-8515
Xiamen Westfox Imp. & Exp.Co., Ltd. Copyright - 2010-2019: All Rights echekwabara.